INTER MILAN VS CHIEVO: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli karaan! – Gool FM
INTER MILAN VS CHIEVO: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli karaan!
Raage December 3, 2017
(Milano) 03 Dis 2017 – Kooxda hawada mareeysa ee Inter Milan oo ah kooxda qura ee aan weli laga adkaanin horyaalka Serie A-da Talyaaniga ayaa fursad qaali ah u haysata inay hoggaanka u qabato horyaalka, iyadoo galabta garoonkeeda ku madadaalinaysa kooxda Chievo.
Dhanka Inter: Spalletti wuxuu dib u helayaa Vecino oo daqiiqadda 1-aadba wajihi doona Chievo, Miranda iyo Gagliardini ayaa ganaaxan. Waxaa daafaca kusoo biiri doona Ranocchia, khadka dhexe waxaa ku jira Brozovic oo u dheeli doona qaab weerar kaalin ah.
Dhanka Chievo: Macallinka Chievo, Rolando Maran, ayaa shirkiisa jaraa’id shalay ka sheegay inuu safi doono khad dhexe oo qayrul caadi ah sababtuna waa maqnaashiyaha laacibiin muhim ah sida Hetemaj iyo Castro, oo dhaawacan, halka Radovanovic uu ganaaxan yahay. Waxaa daqiiqadda 1-aadba fursad heli doona Bastien iyo Rigoni.
BEVENENTO VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay duhurkan kusoo geli karaan!
"Waa inaan 4-0 uga adkaanaa PSG" - Thomas Muller oo doonaya in kooxdiisu ay qabato hogaanka guruubka